Tsy fanarahan-dalàna: naaton’ny CUA ny fanorenana trano etsy Tsiazotafo | NewsMada
Tsy fanarahan-dalàna: naaton’ny CUA ny fanorenana trano etsy Tsiazotafo
Nitondra fanamarihana mahakasika ny fanorenana tsy ara-dalàna etsy Tsiazotafo ny kaominina Antananarivo Renivohitra. Voalaza amin’izany fa ninia nandika ny lalàna ny fanorenana ny trano lehibe iray eny an-toerana.
Rihana telo ny voafetran’ny lalàna sy nanomezana taratasy fahazoan-dalana. Rihana 10 anefa no hita eny an-toerana ankehitriny. Efa namoahana taratasy fampiatoana ny asa, ny 20 janoary teo, ny tompon’ny trano. Efa tonga hatramin’ny fanakatonana na « scellage » mihitsy izany.
Amin’izao fotoana izao anefa, manohy ny asa fanamboarana hatrany izy ireo ary miseho andro antoandro izany izay manaporofo ny tsy firaharahana mihitsy ny fididiana ny Tanànan’Antananarivo.
“Tsy azontsika ekena ny tsy fanarahan-dalàna sy ny fanararaotana toy izao. Noho izany, tsy maintsy handray fepetra hentitra ny kaominina Antananarivo Renivohitra. Tsy ara-dalàna ny fanorenana toy izao sady mitera-doza ho an’ny rehetra”, hoy ny ben’ny Tanàna Andriantsitohaina Naina.